Uchwepheshe we-Semalt uchaza indlela yokuvimbela i-Darodar Nginx
I-Darodar iyi-spammer yokudluliselwa edumile evala ama-akhawunti we-Google Analytics kokubili amawebhusayithi amancane namakhulu amakhulu ane traffic enonya nephansi. Ngeshwa, i-Google Analytics ayikwazi ukuyihlunga kahle, futhi isayithi lakho lokusesha lesayithi liyehla ngesinye isikhathi. Abanye abakwa-webmasters nabathandi be-bloggers abathintekayo bakhulume ngemisebenzi yaseDarodar, behlinzeka imininingwane mayelana nendlela yokuyivimbela. Ngisho nama-plugin ambalwa we-WordPress asetshenzisiwe ukuqeda ukuhamba kweDarodar, kodwa nansi indlela elula futhi evelele yokuvimbela it nginx.
Ngalolu lwazi olunikezwe isazi esiphezulu se Semalt , uJulia Vashneva, ungathola impindiselo encane emakhakheni ogaxekile.
Yini okufanele uyivimbele?
Into yokuqala ukukhomba ukuthi ufuna ukuvimba bani. Ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, ungasetha imingcele emisha bese uhlola ikhwalithi yethrafikhi yakho. Kumele uqiniseke ukuthi uqeda ukuvakashelwa ngesilinganiso esiphansi seseshini kanye nesilinganiso se-100% sokunciphisa. Ngokudabukisayo, ama-botnets afana neDarodar.com anzima ukubhekana nawo njengoba amab bots kanye nezinsipho zabo zikhona yonke indawo kwi-intanethi.
Udinga ukuthola uhlu lwamasayithi angase athole ithrafikhi engalungile. Akulula kakhulu ikakhulu uma unenombolo enkulu yamawebhusayithi. Lungisa uhlu ngamagama amasayithi athola ugaxekile wokudluliselwa, futhi unqume ukuthi yiziphi okufanele uzivimbele. Amacala abalulekile esiwafumene ukuthi kufanele uwafake ohlwini lwakho kukhona izinkinobho-for-website.com, darodar.com, hulfingtonpost.com, priceg..com, ilovevitaly.co, forum20.smailik.org, blackhatworth.com, ne-o-o-6-o-o.com. Kufanele uvimbele wonke lawa mawebhusayithi ukuvikela imibiko yakho ye-Google Analytics.
Kumele ukhumbule ukuthi i-Darodar.com ngeke ihloniphe i-akhawunti yakho yakwa-Google Analytics futhi ayilaleli ama-robots.txt. Yingakho kufanele uqondise kabusha iziphequluli nezibungu zabo kwiwebhsayithi labo kanye nokudlela nge-akhawunti yabo ye-Google Analytics ngokusebenzisa amakhodi akhethekile. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa amasevisi wokunciphisa i-URL (shadyurl.com) ngokuwaqondisa kabusha nge-URL engahleliwe, ngokudideka kakhulu i-Google Analytics.
Ukukhuluma ngobuqotho, kungenzeka ukuthi abangeke bavela kubathuthukisi nabenzi beDarodar, kodwa kufanele uqondise kabusha izimoto zabo ukuvikela iwebhusayithi yakho kwi-intanethi. Njengoba unikezwe isimo sengqondo esingenaphutha ku-Facebook nakwa-Twitter, akufanele uzizwe unecala noma unecala. Kungenzeka ukusetha izitatimende eziqondene nabo bonke abathumeli, ukuqinisekisa ukuvikelwa kwakho emiphumeleni yosesho.
Hlola konke ngokufanele
Okokugcina kodwa hhayi okungenani, kufanele uhlole konke ngokufanele. Njengoba usuhlaziye amafayela we-nginx config, kuhle ukuhlola ukuthi ngabe uvimbele ukuthi yini ofuna ukuyivimba noma cha. Kubalulekile ukudala ukufaniswa kwamanga. Kunalokho, kufanele ugxile ekuvinjeni i-Darodar ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Uma ususethele ukuqondisa nokuphambuka, kufanele usebenzise ithuluzi lesimo seSeva ukuze uhlole izimpendulo zeseva ngezinkambo eziningi zokudlulisela. Uma unomunye umqondo engqondweni yakho futhi ufuna ukwabelana nathi, ungakhohlwa ukusiphonsa i-imeyili noma ukuphawula ebhokisini elingezansi Source .